Ifulethi Elithandekayo Lomlando - I-Airbnb
Ifulethi Elithandekayo Lomlando
I-Victorian engokomlando, yase-Italy etholakala emgwaqweni othulile edolobheni lase-Hudson, amabhuloho amabili kude ne-Warren Street enhle. Indlu yethu inendawo engemuva ebiyelwe egcwele izinto eziluhlaza, izingadi eziluhlaza okotshani, nezindawo zokuphumula ezicatshangisisiwe. Iklanywe ngokunethezeka nobuhle engqondweni, induku yethu enhle, enokuthula iyindawo ekahle kakhulu yokufika e-Hudson.
Zibalekele endaweni epholile enemininingwane egciniwe yekhulunyaka le-19 kanye nokuthinta kwesimanje, okuhlinzeka ngobubanzi namandla athokomele akudala abalulekile ukuze uzizwe ulinganisele futhi usekhaya. Ifulethi licishe libe ngu-1,200sq futhi lisezingeni lesibili lekhaya lethu elihle elinomlando maphakathi nawo-1800. Ihlanganisa iminyango emibili yangasese, eyodwa eholela engadini engemuva, lapho ungajabulela khona i-hammock nama-hydrangeas angapheli. Isistimu yokuhlunga yendlu yonke ihlinzeka ngamanzi okuphuza ahlanzekile futhi inikeza ukugeza okunethezeka ngaphandle kwezinsalela zamakhemikhali ezivamile. Amalineni ethu kakotini emvelo kanye nomatilasi abanethezekile baqinisekisa ukuphumula okuthambile nokuthambile, kanye nezingubo zokulala ezithokomele kanye namathawula amahle ukuze uzisonge ngawo.
Ukuhlala kwakho kubandakanya imikhiqizo yokugeza yemvelo ezondla ingqondo, umzimba, nomoya, kanye nekhofi, itiye, nokudla okukhethekile endaweni yethu yokudlela ebuyiselwe yekhulunyaka le-19. Uma uthanda ukupheka, isitofu seViking sigcwele amandla okupheka futhi silungele ukwenza idili lakho! Imidlalo, omata be-yoga, nokukhethwa okuhle kwezincwadi kungokwakho ongakuboleka futhi ujabulele futhi. Ifulethi linendawo yokuphumula, ikamelo elilodwa elikhulu elinombhede olingana neNdlovukazi, ikamelo lokulala elengeziwe elinombhede olala ngamawele, igumbi lokudlela, igumbi lokugezela elineshawa yemabula, nekhishi elivulekile.
Igceke lethu liyindawo okwabelwana ngayo nendlu yethu encane i-airbnb, evulekele izivakashi uma isimo sezulu sivuma. Nethezeka, zindle engadini, jabulela umlilo, noma ipikiniki ngaphansi kwesihlahla somquba.
Ukuhamba ngezinyawo okufushane kwemizuzu emi-2 kuzokuyisa ku-Warren Street yomlando, idolobha lika-Hudson eliwumlando kodwa elijabulisayo elifafazwe ngamagalari obuciko, izitolo zemiqondo, izindawo zokudla ezishisayo, izitolo zakudala, kanye nokudala okugcwele ngabadali bazo zonke izinhlobo zokuphila. Ukuhamba ngezinyawo imizuzu emi-5 ukusuka ku-airbnb nakho kuzokuholela emfuleni i-Hudson, obheke Izintaba zeCatskill namahlathi aqhakazile. Konke okudingayo kungaphakathi kwebanga lokuhamba ukusuka e-Farmers' Market ukuya e-Hudson Opera House; sikubekele wena.
Singatholakala ngokudinga kwakho kukho konke ukuhlala kwakho, futhi ungangena usebenzisa ilokhi yethu yekhiphedi futhi uzigcine kuwe ngokuphelele. Singumbhalo osheshayo, sishayele, noma sithumele i-imeyili uma udinga okuthile. Eyunithi yethu ehlukene ezansi, sinezinja ezimbili, zombili ezinobungane kakhulu futhi ungase uhlangane nazo ngemuva kwendlu.
Singatholakala ngokudinga kwakho kukho konke ukuhlala kwakho, futhi ungangena usebenzisa ilokhi yethu yekhiphedi futhi uzigcine kuwe ngokuphelele. Singumbhalo osheshayo, sishayele,…